Sabata Mugovera here, kana kuti Rubapatidzo rweMweya Mutsvene?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Sabata Mugovera here, kana kuti Rubapatidzo rweMweya Mutsvene?
Sabata Mugovera here, kana kuti Rubapatidzo rweMweya Mutsvene?
MATEO 15:9 Asi vanondinamata pasina, vachidzidza zvidzidzo asi iri mirairo yavanhu.
Tinofanirwa kuva nechokwadi chekuti dzidziso kana mharidzo yedu pamusoro peSabata ndeyechokwadi.
MaKristu mazhinji anoti Svondo ndiyo Sabata kana zuva rekuzorora.
Asi izvi hazvina humbowo hunobva muBhaibheri.
Zuva reSabata harisi Svondo. Svondo rakazova zuva rekunamata maKristu achirangarira kumuka kwaJesu kuvakafa (mukuru mumwechete ega wezvitendero akakunda rufu kuunzira vanomunamata hupenyu husingaperi) uye ndiro zuva rakadururwa Mweya Mutsvene kuvadzidzi pazuva rePentecosti (zvakaita kuti vadzidzi vaJesu vasunungurwe kubva mukusatenda uye kuti vazarurirwe nekuzorodzwa kubva kuzvivi vakasazodzokera kwazviri zvekare). Kwapera chinguva maKristu mazhinji akarasikirwa nemuono wekukosha kwerubapatidzo rweMweya Mutsvene kuti vave vakasunungurwa uye kuti vave vakazorodzwa kubva pakusatenda muna Mwari nemoyo yese. Vakabva vakoshesa kunamata Svondo iro ringori zuva rekuzorora kubva pamabasa emaoko. Kereke yeRoman Catholic yakasarudza zuva iri kare-kare nekuzodarika kwemazana emakore tsika iyi yakabva yatambirwa nekuteverwa. Zviri nyore kutevedza tsika pane kudzipikisa.
Hapana chakaipa pakunamata musi weSvondo. Chakaipa kudaidza Svondo kuti Sabata. Kana uchida zuva pasvondo kuti rive Sabata rekuzorora pamabasa emaoko Bhaibheri rinotaura pachena kuti zuva rechinomwe pasvondo Mugovera. Asi kana uchida kuti Sabata chive chiitiko chemukati-kati pakati pako naMwari zvinoita kuti moyo wako usiye zvese zvakaipa uchiva mutsungairiri wekururama, Sabata rako rinova musi wawagamuchira rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Kutora zuva reSvondo kuriita Sabata itsika yevanhu yavakaisa mukereke asi haimo mumaGwaro.
Nekuti raive zuva rekunamata vanhu vakada kuwedzera kukosha kwaro vakabva vadaidza Svondo kuti zuva raShe.
Asi kuti zuva raIshe zvinomiririra zuva rekutambudzika, apo Mwari anotsvaira kuipa kwese nekutadza kwakaitwa nemunhu panyika. Iri ''izuva remunhu" apo munhu anoita zvaanoda. Nekukasika kuri kuuya "zuva raShe" apo Mwari anosvikoita zvaanoda, kutsvaira nekuparadza kutadza kwese nekuipa kwenyika ino.
ISAYA 13:6 Chemai nekuti zuva raJehova riri pedyo; rinosvika sekuparadza kunobva kunaWamasimbaose.
ISAYA 13:9 Tarirai zuva raJehova rinouya, rinotyisa rine hasha nekutsamwa kukuru, kuti ashandure nyika rive dongo, nokuparadza vatadzi vayo vabvemo.
JOERE 3:14 Vazhinji-zhinji, vazhinji-zhinji vari’po mumupata wokutonga! Nokuti zuva raJEHOVA rava pedyo mumupata wokutonga.
Sarudzo. Tese tinofanira kusarudza. Tiripo pakuita zvinhu zvine mukurumbira kana kuti zvinotiitira here kana kuti tichaita zvinotaura Bhaibheri kunyange zvichitiita kuti tive chikamu chevashoma?
AMOSI 5:18 Mune nhamo imi munoshuva zuva raJehovha! Zuva raJehovha munorida neiko? Richava rima, hachingavi chiedza.
MARAKI 4:5 Tarirai ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJehovha, rinotyisa, risati rasvika.
Tinoda muporofita kuti atitendeutsire kuBhaibheri ratave kufuratira. Kutidzosera pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente Itsva. Nekuti zvisinei nekutendeka kwedu patsika dzemukereke, kutenda kwedu kusingaenderani nezvinobva muBhaibheri kunozotitungamirira kunopinda munguva yekutambudzika.
I VATESARONIKA 5:2 Nokuti imi mumene munoziva kwazvo, kuti zuva raShe rinosvika sembavha usiku.
II PETRO 3:10 Asi zuva raShe richauya sembavha; vusiku naro denga richapfuvura nokutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika nemabasa ari mairi achapiswa.
Svondo harisiriro zuva raJehovha. Ngatimbotii Mugovera ndiwo musi weSabata.
Ndizvo here kuti Sabata Mugovera, zuva rekuzorora kubva kumabasa ataiita pasvondo rese, tisati tadzokera kumabasa panotanga svondo rinozotevera racho?
Zvimwe zvingangoite zvakare:
Sabata rubapatidzo rweMweya Mutsvene here, kutendera Mweya Mutsvene kuti utsive kusatenda kwako nekutenda muna Jesu Kristu neShoko rake dzvene, Bhaibheri?
Kristu anova Ishe wehupenyu hwako sezvo achidzora nekugadzirisa mafungiro nemaitiro ako uye ndipo paunobva pakusatenda wowana zororo kubva pamabasa erima, ekutadza kwese kwawaiita.
Hauzodzokerazve pamabasa ako ekukanganisa uye ekusatenda zvakare.
Apo Mwari aive pamusoro pemaJuda (kunze kwavo) Sabata raive zuva rekuzorora.
Zororo kubva pazvido zvenyama ichidokwairira zvinhu zvepfuma yepasi rino.
Mwari aive kunze kwemaJuda aidawo zuva rekuti vaita nezvake chete kwete zvido zvavo zvenyama uye kuzviunganidzira pfuma yenyika ino.
Kana Mwari achirarama mauri, Sabata ruwadzano rutsva rwaunenge watanga naMwari. Zororo rechokwadi ndirwo rudo rwemukati rwaunoita kuna Mwari anenge achirarama mauri.
Sungano itsva inoreva shanduko patariro dzatiinadzo dzenyama apo tinotarisira kuzadziswa kwezvido zvenyama uye zvepfuma yepasi rino dzichiva tariro dzezvido zvemweya, hukama hwakadzama naKristu pamweya.
JEREMIA 31:31 tarirai mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehova, ndichaita sungano itsva neimba yaIsraeri, neimba yaJuda.
32 Haingafanani nesungano yandakaita nemadzibaba avo namazuva andakavabata ruoko ndikavabuditsa munyika yeEgipiti, vakaputsa sungano yangu iyo, kunyange ndakanga ndiri murume kwavari ndizvo zvinotaura Jehova.
33 Asi heyi sungano yandichaita neimba yaIsraeri shure kwamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndichaisa murairo wangu mukati mavo, ndichaunyora mumoyo yavo, ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu.
Tikatarira pakarenda zuva rekutanga pavhiki iSvondo, zuva rechinomwe Mugovera.Tinokwanisazve kuona svondo riri zuva rechisere pavhiki remazuva ekare.
Svondo, Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu, Mugovera, Svondo.
Saka Svondo harisi zuva rechinomwe. Saka Svondo harikwanisi kuva Sabata.
Ndiko kuiswa kwakaitwa zuva reSabata neBhaibheri.
GENESISI 2:3 Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita mutsvene; nokuti akazorora nawo pabasa rake rose, raakanga asika nekuita iye Mwari.
Zuva iri raive Mugovera sezvo raive zuva rechinomwe.
Asi nyaya huru yaive pamaropafadzo aMwari. Akaropafadza zuva kwete nekuti raive zuva rechinomwe (Mugovera) asi nekuti akazorora.
Saka maropafadzo ari pazororo kwete pachinomwe.
Sabata izororo raMwari.
"Sabata" zvinoreva kuti "zororo".
Tinokwanisa chete kunzwisisa nekugadzirisa zuva reSabata kana tichinge tawana zororo raMwari matiri isu vanhu.
VAHEBHERU 4:9 Zvino zororo reSabata revanhu vamwari richipo.
10 Nokuti uyo wakapinda muzororo rake wakazorora iye amene pamabasa, saMwari panaake.
Tinowana chete zororo raMwari kana isu tazorora pamabasa edu, nzira imwe yakazorora nayo Mwari.
Kana uchishanda kwesvondo rese, wozorora Mugovera, wodzokerazve kubasa panotanga rimwe svondo; Iyi handiyo nzira yakazorora nayo Mwari.
Mwari akaita mabasa ake ekusika akapedza haana kuzosika zvakare. Haana kuzodzokera pakuita mabasa ekusika zvakare nekuti akanga apedza nezvawo.
Mwari akazorora nekuti kwaive kusina chivi munhu aisafanirwa kushanda zvakanyanya kuti ararame.
Pakapindira chivi Mwari akatuka nyika zvakamanikidza munhu kushanda nesimba kuti ararame.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati zvawakateerera izwi remukadzi wako, ukadya muti wandakakuraira ndichiti, Usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose eupenyu hwako.
18 Ichakuberekera minzwa norukato iwe uchadya miriwo yemusango;
19 Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva.
Nekuda kwechivi, Mwari akatongera munhu kuhupenyu hwese hwekushanda nesimba.
Saka tingabve seiko pamabasa edu kuti tiramba tichikwanisa kurarama tisingadzokere paari.
Izvi hazviite nekuti tikafunga nezvemabasa emaoko tinofanirwa kuramba tichimaita kuti tirarame. Tese tinofanira kushanda. Tinongoda zuva rekuzorora, kamwechete pavhiki, todzokera kumushando zvakare.
Saka zvaiitwa nemaJuda waingova mumvuri wezororo chairo. Vaishanda, vozorora, vodzokerazve kunoshanda richiramba riri denderedzwa rekuita uku. Handizvo zvakaitwa naMwari.
Saka kana achinzi "mabasa" hakusi kurehwa mabasa emaoko anotiraramisa. Zvine chirevo chakadzama. "Mabasa" edu zvinomiririra mabasa ezvivi atinofanirwa kubva paari. Takaberekwa muzvivi tinoitawo mabasa edu. ''Mabasa edu'' aya anomiririrawo shuviro dzedu nezvinangwa zvedu uye zvatinofadzwa nazvo. Mwari anotida kuti tive chikamu chehurongwa hwake, kwete hurongwa hwedu.
VAROMA 3:23 Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari.
Zvino tinosangana naKristu seMuponesi wedu, totendeuka kuzvivi zvedu. Asi aya angori mavambo chete.
Tinoda Mwari mumoyo yedu kuti atidzore tirege kudzokera kumabasa edu ekubhema, kunwa kutamba njuga nezvimwe zvakadaro. Mwari ega ndiye anokwanisa kuita kuti usararame mumabasa ako kana ukamutendera kurarama mukati memoyo wako.
Nguva imwechete yatingasiye kurarama muzvivi inotanga apo tinotendera Mwari kurarama mumoyo yedu kuti atidzore uye kuti atipe zvido nezvinangwa zvitsva zvekuraramira zvinova zvitsvene. Iyi ndiyo inova Sabata yedu yezvirokwazvo apo tinenge tazorora kumabasa edu ekare ekutadza ayo tisingazoiti zvakare.
Iyi inonzi Sabata yeMweya Mutsvene.
Hwakagara huri hurongwa hwaMwari kuti agare, kwete muzvivakwa, asi mumuyo yevanhu. Kugara kwaMwari mumoyo mako kunokuita akaropafadzwa. Vanhu vazhinji vanopesana nechinangwa chaMwari ichi voisa pfungwa dzavo pakuchengetedza zuva chinova chiitiko chekunze.
Miviri yedu tinoifananidza nemuchovha wemotokari unotakura veruzhinji. Tinotakurana nemweya yakaipa mizhinji. Patinoporeswa ndeapo patinomira tokoka JESU kuti timutakure mumuchovha wedu. Imwe mweya yakaipa inotanga kubuda. rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndeapo patinozopa Jesu mukana kuti atyaire muchovha wedu tomurega otyaira hupenyu hwedu mukati merwendo rwehupenyu.
Tinogamuchira sei Mweya Mutsvene.
Nzira yacho yakatambanudzwa kuna Mabasa avaApostora 2 vs 38.
MABASA AVAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari; Tendvukai, mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Saka Sabata kuriita musi wemugovera kwaingove fungidziro yezororo raMwari.
Hakuna murawu unoshandiswa pamunhu ane zvivi, ungakwanise kuva wakagadzirwa zvekubata zvivi zvake zvose.
Kunyangwe sabata raive risina kusimba zvekushaiwa airityora.
Kwaive nezvimwe zvaitarisirwa kuti zvaikwanisika kuitwa nemusi wesabata;
Chinhu chatingatarise chekutanga:
MATEO 12:5 Ko hamuna kurava pamurairo, kuti musabata vaprista vanoputsa murairo wesabata mutemberi, vasinemhosva?
Maprista aifanirwa kuita zvavaive vakatarirwa muchitendero. Izvi zvaisaenderana nekuti apa zvaitoreva kuti mukuru wezvechitendero aitoshanda. Hapana zvimwe zvavaikwanisa kuita saka kuti ashande kwaitenderwa.
Asi kunyangwe zvakadaro vaityora Sabata.
Kuchengetedza mutemo wekuzorora Sabata hakusi iko kuzadzisa murairo weSabata. Mwari aida kuti maJuda amunamate pazuva rawo rezororo (Mugovera) Izvi zvaiita kuti mutungamiriri wechitendero ashande zvakaomarara neMugovera.
Chinhu chatingatarise chechipiri:
MATEO 12:11 Akati kwavari, ndiani kwamuri ungava negwai rimwe kana rikawira mugomba neSabata ungarega kuribata ukaribuditsa here?
Zviitiko zvakaita senjodzi zvinoda kutarirwa nekukasika zvinoita kuti Sabata rityorwe. Kana tichinge tasangana nenjodzi hatingaisiyi uye Mwari vanotendera. Vanotitendera kuti tidzivirire kurwadziwa uye kunyangwe rufu. Asi zvekare zvinosanganisa kutyora Sabata.
Chinhu chatingatarise chechitatu:
RUKA 13:15 Asi Ishe vakamupindura akati; Imi vanyengeri! Ko umwe neumwe wenyu haangasununguri mombe yake kana mbongoro yake pachidyiro nemusi weSabata, akaenda nayo kundoimwisa here.
Zvipfuyo zvinoda kutaririrwa nemusi weSabata. Kutaririra zvipfuyo kwakakosha saka zvekare murairo wekuti hakushandwi neSabata watotyorwa.
Murairo wekuchengeta zuva reSabata unotozouya pechipiri kana takatarisana nedzingiso iyo yaifanirwa kuitwa zuva rechisere remwana kubva paazvarwa.
Saka kune zvimwe zvinhu zvavaisakwanisa kusiya zvisina kuitwa zvaitozomanikidza kuti Sabata igova pechipiri izvo zvava zvekutanga.
Sabata reMugovera raisakwanisa kushandidzana nedzingiso. Kana mwana aikwanisa mazuva masere neMugovera aitofanirwa kudzingiswa.
Saka murairo weSabata waitotyorwa vanhu vachizadzisa wekudzingisa.
Hakuna murairo unoshanda kwatiri vanhu venyama vazere nekutadza, ungavhariridze zviitiko zvehupenyu hwatiri kurarama.
GENESISI 17:9 Mwari akatiwo kuna Abhurahamu, kana uri’we, chengeta sungano yangu, iwe navana vako vanokutevera pamarudzi avo ose.
10 Ndiyo sungano yangu, yomunofanira kuchengeta pakati pangu nemi navana vako vanokutevera, vanakomana vose pakati penyu ngavadzingiswe.
Sungano yaAbrahama naMwari yaive yakanangana nekucheka vachibvisa nyama kuitira kuti vaizokwanisa kutevera hutungamiri hweMweya Mutsvene.
Kudzingiswa kwepanyama mumvuri wechiitiko chakadzama apo tinotendera Mweya Mutsvene kuti ucheke uchibvisa zvido zvedu zvenyama kubva pamoyo yedu kuti tisave nekudokwairira kuita zvivi.
MuTestamente yekare sabata ndiyo yaive sungano yavo huru naMwari.
Apo Sabata raikurirwa nerudzingiso kana zuva remwana rechisera raisvika uri Mugovera.
GENESISI 17:12 Mwanakomana une mazuva masere pakati penyu ngaadzingiswe, mukomana mumwe nemumwe pamarudzi enyu, kana akazvarwa mumba, kana akatengwa nemari kuvatorwa vapi navapi, vasati vari vavana vako.
JOHANI 7:22 Nemhaka iyi Mosesi wakakupai dzingiso (handiti ndeyaMosesi, asi yamadzibaba); zvino imi munodzingisa munhu neSabata.
Kare-kare abhurahama, Mosisi asati auya, akapiwa murairo, akapiwa kudzingiswa.
JOHANI 7:23 Zvino kana munhu angadzingiswe neSabata, kuti murairo waMosesi urege kuputswa, ko imi monditsamwira kuti ndakaporesa munhu zvakakwana.
Kudzingiswa, kuchekwa kwenyama kunorwadza kwazvo, kwaitenderwa musi weSabata. Asi maJuda aitsamwa kuti Jesu aporesa neSabata.
Kupona kwechokwadi kupora kubva murudo rwekuita zvivi. Mweya Mutsvene wega ndiwo unokwanisa kuita basa iri mumoyo yedu.
Zuva rechisere rehupenyu hwekasvava ndiro raiti rikasvika riri zuva rechinomwe raitora mukombe. Kudzingisa zuva rechisere rehupenyu hwerusvava kwaive kwakakosha kupinda zororo rezuva rechinomwe raiva Sabata.
Zvakare Sabata yemugovera yaivewo nezvaiikurira uye miganhu yayaigumira.
Kudzingisa, kucheka kwenyama pamunhu, kwakakosha kupfuura zororo remusi weMugovera kubva pamabasa emaoko.
VAROMA 2:29 Asi muJuda ndiye uri muJuda nechomukati; nokudzingiswa ndiko kwomoyo, muMweya, kusati kuri kwezvakanyorwa; iye haarumbidzwi navanhu, asi naMwari.
Mweya Mutsvene wega ndiwo unokwanisa kucheka wobvisa rudo rwekuita zvivi mumoyo yedu.
Saka kudzingiswa chiratidzo cheMweya Mutsvene apo Mwari anotonga zvido zvemoyo edu. Zvido zvemoyo yedu ndizvo zvinochekwa kubva pazvinovavarira nyama ndipo patinowana zororo kubva kumabasa ezvivi.
Izvi zvinoitika chete kana tichinge tazvarwa patsva pamweya.
Hakuna zororo pamweya (Sabata) kunze kwekunge moyo yedu yachekwa kubva pazvido zvenyama (kudzingiswa).
Kudzingiswa kwaiitwa kwaive mumvuri werubapatidzo rweMweya Mutsvene uyo uri wega unocheka zvido zvenyama kubva kwatiri, kurarama nekupfeka nemamwe maitiro ese enyika.
Panyama tinotorwa moyo zvikuru nemapfekero enyika ino kozotevera kurarama muhurongwa hwaMwari.
Kana moyo yedu yachekwa kubva pazvido zvenyama kupfurikidza kutenda muMweya Mutsvene ugere mukati medu waJesu Kristu , ndipo patinowana zororo kubva kuzvivi sezvo tinenge tisisina hanya nemaitiro kana mapfekero enyika.
REVITIKO 23:39 Zvino pazuva regumi namashanu remwedzi wechinomwe, kana makohwa gohwa reminda, munofanira kuita mutambo waJehova mazuva manomwe; zuva rekutanga rinofanira kuva rekuzorora kwazvo, nezuva rerusere rinofanira kuva rekuzorora kwazvo.
Zuva rechi 15 pamwedzi rinokwanisa kuva chero zuva pasvondo asi apa raive richinzi iSabata.
Mazuva masere akatevera raive rimwe Sabata zvekare.
Pamakore manomwe zuva rechi 15 remwedzi wechinomwe rinokwanisa kuva riri Mugovera kamwechete chete, uye mazuva masere anoritevera hauzovi Mugovera asi rinenge riri Sabata.
Apa Sabata rangove chero zuvu resvondo rinenge riri zuva rechi 15 pamwedzi wechinomwe.
Saka Sabata harisisina chiremerera pakudaidzwa kunzi zuva rechinomwe.
Parizvino Sabata rakureva chero zuva pavhiki rinenge riri musi wa 15 wemwedzi wechinomwe pagore iroro.
Saka apa Sabata hazvirevi kuti zuva rechinomwe asi zvinoreva kuti zororo.
REVITIKO 16:29 Unofanira kuva murairo usingaperi kwamuri; nomwedzi wechinomwe, nezuva regumi remwedzi, munofanirwa kuchema pamweya yenyu, nokusabata mabasa ese, kana ari munhu akaberekerwa pakati penyu, kana ari mutorwa agere pakati penyu.
30 Nekuti munofanira kuyananisirwa nezuva iroro, kuti munatswe; munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJehova.
31 Rinofanira kuva Sabata rekuzorora kwazvo kwamuri, munofanira kuchema pamweya yenyu; murairo usingaperi.
Zuva regumi remwedzi wechinomwe rimwe Sabata zvekare. Zuva rekuyananisirwa.
Kuzorora pazuva iri kwaive kwakakosha, kunyange waisava musi weMugovera.
Saka Sabata waisangove musi weMugovera chete uye handiwo wega musi waikosheswa pakunamata.
REVITIKO 23:27 Zuva regumi remwedzi uyu wechinomwe izuva rokuyananisira, munofanira kuita naro ungano tsvene, munofanira kuchema pamweya yenyu, nokuvigira Jehova chipiriso chinoitwa nemoto.
REVITIKO 23:32 Rinofanira kuva kwamuri Sabata rekuzorora kwazvo, munofanira kuchema pamweya yenyu, munofanira kuchengeta Sabata renyu, nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana, kubva pamadekwana kusvika pamadekwanazve.
Saka Sabata harinei nekuva Mugovera apa raingova zuva rechigumi pamwedzi wechinomwe.
REVITIKO 23:24 Taura navana vaIsraeri, uti, pamwedzi wechinomwe, zuva rekutanga kwemwedzi rinofanira kuva kwamuri rekuzorora kwazvo, rinoyeudzwa nekuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene.
Mwedzi wegumi waiva neSabata pazuva rekutanga uye rechigumi.
Saka Sabata raive risisina kusimbiswa kuva paMugovera chete. Asi raingove zuva rekuzorora.
Vamwe vanhu vanoti zuva reSabata (pahumwechete) rinomiririra Mugovera kozoti mazuva eSabata (pahuzhinji) zvinomiririra mwamwe mazuva epakati pesvondo ayo aive akatsudzwa kuti mazuva eSabata.
Asi Gwaro rinotevera rinoreva Mugovera richitaura pahuzhinji pekuti mazuva eSabata uye pahumwechete pekuti zuva reSabata.
MATEO 12:10 Zvino tarirai kwakange kuri nomunhu wakange ane ruoko rwakawonyana. Vakamubvunza vachiti zvakatenderwa kuporesa neSabata (mazuva) here? Kuti vamupomere mhosva.
11 Akati kwavari, ndiani kwamuri ungava negwai rimwe kana rikawira mugomba neSabata (zuva) ungarega kuribata akaribudisa here?
12 Munhu unopfuura gwai zvikuru sei! Saka zvakatenderwa kuita zvakanaka neSabata.
MuTestamente Itsva tinofanirwa kutsvaga nyaya huru yakamiririrwa nemurairo.
Mvura nenyama zvinomiririra mharidzo, kudya kwemweya.
Sabata zvinoreva zororo kubva pazvivi, kwete basa remaoko. Urwu rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
VAKOROSE 2:16 Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo anokutongai pane zvokudya, kana zvokunwa, kana nokuda kwomusi wemutambo, kana pakugara kwemwedzi ,kana paSabata.
17 Izvi mumvuri wezvichauya; asi muviri ndowaKristu.
Iri ndiro ngwaro rekupedzisira rinotaura nezveSabata muTestamente Itsva.
Hariisi kukosha pazuva rechinomwe seSabata asi rinototiyambira kuti tisatore Sabata sezuva.
Rinotinongedzera imwe nzira kubva pakufunganya nezveSabata sezuva kana kuti sezuva dzvene.
Sabata rezuva reMugovera raingove mumvuri wechokwadi chakadzama.
Kana wazarurirwa wave nechokwadi kana chinhu chaicho uchatevererei mumvuri wacho?
VAGARATIA 4:9 Asi zvino, zvamunoziva Mwari, zvikuru zvamunoziikanwa naMwari modzokerazve seiko kune zvokuvamba zvisine simba, zvovurombo, muchidazve kutanga kuve varanda vazvo?
11 Ndinotya pamusoro penyu, kuti zvimwe ndakabate-basa kwamuri pasina.
Kusimbira pakukoshesa zuva seMugovera kana nguva inouya kamwe pagore seKisimusi ndezvevurombo. Kukurudzira kunamatwa kwezuva, muna 274 AD mambo wemaRoma Aurelian akaita 25 Zvita zuva rekuzvarwa kwamwari wavo wezuva. Mhemberero idzi dzaisavako panguva yekereke yekutanga. Kana tichitenda kuti izuva rekuzvarwa kwaJesu Kristu nesuwo hatisi kutevedza zvinorehwa neBhaibheri kana nechitendero chekereke yekutanga sezvo vaive vasingatendi muna izvozvo.
Zororo rechokwadi rinouya kana tichinge tichirarama muhuvepo hwaMwari.
EKSODO 33:14 Jehova akati; Ini ndimene ndichaenda newe, ndikupe zororo.
Kunyange muTestamente yekare Mugovera waisava zororo rakazara pachawo.
DEUTERONOMIO 12:9 Nokuti muchigere kusvika pazororo nepanhaka, yaunopiwa naJehova Mwari wako.
Vaizorora Mugovera wega wega. Asi kwaive kuchiri nerimwe zororo munyika yechipikirwa.
DEUTERONOMIO 12:10 Asi kana mayambuka Jorodhani, mogara munyika yamunopiwa naJehova wenyu, ive nhaka yenyu, kana iye achikupai zororo pavavengi venyu vose vanokukombai, mogara makachengetwa.
Vaizorora Mugovera wega-wega asi tichiwedzera pazororo iroro vaida kuzorodzwazve pavavengi vavo.
Zororo reMugovera raive memiganhu sezvo vaizorora kubasa chete. Raisakwanisa kuvapa zororo kubva kuvavengi vavo. Nekuda kweizvi vaida nyika yakasimba , Parestina (yaidaidzwa kuti Canani) umo vaizogara mune zvakanaka sezvo dzimwe nyika dzaizotya kuvarwisa.
ISAYA 14:3 Zvino nezuva iro kana Jehova achikuzorodza, pakuchema kwako napakutambudzika kwako, napakubata kwako kunorema kwawakabatiswa nako.
Vaidawo zororo kubva pakushungurudzwa, kutya uye husungwa (huranda).
Izvi zvaizoitika chete kana vave rudzi rwakasimba munyika yavo yechipikirwa.
Kusashanda musi weMugovera kwaisakwanisa kupa vanhu ava zororo kubva pakutya, kushungurudzika uye huranda.
Mugovera wakarasikirwawo nekukosha kwawo sezuva rekunamata.
MaJuda akapiwa zuva rakakosha rekupembererera.
Vaifanirwa kuva mhemberero dzezvibereko zvekutanga izvi zvaifanirwa kuitwa musi weSvondo.
Apa zuva reSvondo ratsudzwa zvakasarudzika kuti rive zuva rekunamata.
REVITIKO 23:10 Taura nevana vaIsraeri, uti kwavari, Kana muchisvika munyika yandichakupai, mukakohwa zviyo zvayo, munofanira kuuya nechisote chezvitsva zvekukohwa kwenyu kumuprista.
Chisote chezvitsva zvibereko zvekutanga kuibva pazvese zvinenge zviri mumunda umwechete.
Mbeu imwe neime yadyarwa pasi, inofa yomuka kuva ipenyu apo inokura kuva muti mutsva.
Uyu mucherechedzo wekumuka kubva kuvakafa.
Munhu anofa, ovigwa kana kuti odyarwa kuvhu ozomuka kubva kuvakafa pamwe chete naJesu Kristu.
Jesu ndiye munhu wekutanga kufa ozomuka kuvakafa ave nemuviri mutsva usingazobatwa nerufu zvekare.
Saka Jesu ndiye chibereko chekutanga cherumuko.
1 VAKORINTE 15:20 Nokuti zvino Kristu wakamutswa kuvakafa, akava chibereko chekutanga chavavati.
1 VAKORINTE 15:23 Asi mumwe nemumwe padzoro rake: Kristu chibereko chekutanga; tevere, avo vari vaKristu pakuuya kwake.
Kupembera kwedu kwezvibereko zvekutanga kuibva mumunda, hakusi kupemberera gohwo rekutanga rezvirimwa zvepanyika pano, kunyange gohwo rakakosha pakupa vanhu chekudya.
Tinopemberera kumuka kwaKristu anova mutungamiriri ega wezvitendero akakunda rufu, akafa akamuka mumuviri mutsva usingazofi zvekare.
Bwiro rake risina munhu ndicho chiratidzo chinoshamisa chikuru muchiKristu.
Saka vaparidzi vanofanira kuzunguzira Kristu vari pamberi pevanhu.
Kuzunguzira kuparidzira, hadzisi tsika kana chijairira. Aripo Jesu kuzokunda rufu.
REVITIKO 23:11 Iye anofanira kuzunguzira chisote pamberi paJehova, kuti chigamuchirwe kwamuri; muprista anofanira kuchizunguzira nomusi unotevera Sabata.
Vaparidzi vanofanira kuzunguzira Muponesi pamberi pevanhu riini?
Musi unotevera (ramagwana) rezuva reSabata.
Sabata Mugovera saka musi unotevera Sabata iSvondo.
Nei kukosha uku kwanova paSvondo zvisinganzwisisiki.
Nekuti Jesu akamuka kubva kuvakafa nemusi weSvondo.
Saka kunamata Svondo kunozadzisa chikamu ichi chemurairo.
REVITIKO 23:15 Zvino munofanira kuverenga kubva musi unotevera Sabata, kubva pamusi wamakauya nawo, nechisote chinozunguzirwa, masabata manomwe.
16 Munofanira kuverenga mazuva makumi mashanu kusvikira pamusi unotevera Sabata rechinomwe; ipapo munofanira kupa Jehovha chipiriso chitsva cheupfu.
Vapedza mhemberero dzezvibereko zvekutanga idzo dzinongova mumvuri wekumuka kwaJesu kwemusi weSvondo. MaJuda aifanirwa kumirira masabata manomwe anova masvondo manomwe (7 x 7 = 49 days) kwozoita zuva rinotevera sabata rechinomwe kana kuti Mugovera rinozova Svondo , vaizova nemabiko epentecosti (zvichireva kuti raive zuva rechi 50)
mhemberero idzi dzinorevei?
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene pazuva rePentecosti, iro raive Svondo.
MABASA AVAPOSTORA 2:1 Zvino zuva rePentecosti rakati rasvika, vakanga vakaungana vose nomoyo mumwe panzvimbo imwe.
3 Vakavonawo ndimi dzichiparadzana, dzinenge dzemoto, ndokumhara pamusoro poumwe noumwe wavo.
Apa svondo yave nekukosha.
Jesu akamuka kubva kuvakafa iri svondo. Ndirwo ruvheneko rweShoko rinoti "Iye amuka" akadzoka panyika iri Svondo. rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwakatangawo iri Svondo.
Pakutanga Mwari paakasika chiedza, chiedza ichi chakarova nyika zuva rekutanga, raive Svondo. Svondo ndiro zuva rinoratidza kana kumiririra chiedza.
Zuva rePentecosti raive Svondo zvakare. Ndiro zuva rakagamuchirwa rubapatidzo rweMweya Mutsvene nevadzidzi vaJesu kereke ikabva yatanga chinangwa chayo.
Saka Svondo yakangogara iri chikamu chemazuva ainamatwa nemaJuda. Asi vaive vasingakwanisi kuona chokwadi chakadzama chaida kuburitswa pachena nemaungano avaiita mazuva eSvondo.
Nyaya yezuva yakatangira muna Genesisi. Zuva raMwari rakafanana nemakore 1 000.
GENESISI 1:3 Mwari akati: chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo.
4 Mwari akaona chiedza kuti chakanaka; Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.
5 Mwari akatumidza chiedza, akati Masikati nerima akaritumidza, akati Vusiku, madeko akavapo, namangwanani akavapo zuva rimwe.
Zuva rakatanga kuonekwa chiedza chezuva panyika raive zuva rekutanga raMwari revhiki rake rekusika.
Munguva yaMwari zuva rimwe makore 1000.
Zuva remunhu maawa 24.
Pakutanga kwaive kusina vanhu, saka tinofanirwa kushandisa nguva yaMwari yaakashandisa pakusika.
5 Mwari akatumidza chiedza, akati Masikati nerima akaritumidza akati Usiku. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe.
Zuva rakava panyika pazuva rekutanga revhiki raMwari rekusika. Izvi zvinoenderana nezuva remusi weSvondo.
MAPISAREMA 90:4 Nokuti kwamuri makore ane chiuru akangofanana nezuva razuro kana rapfuura, senguva yokurinda yousiku.
II PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwa chinhu chimwechete ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita semakore ane chiuru, nemakore ane chiuru sezuva rimwechete.
Zuva rekutanga revhiki revanhu iSvondo. Iri ndiro zuva rerumuko apo chiedza cheMweya Mutsvene chakarova nyika pekutanga uye Kristu akakunda rufu zvose zvakaitika iri Svondo.
Yaiva zvekare Svondo apo pakaburuka Mweya Mutsvene pazuva rePentecosti kuitira kuti kereke yekutanga ikwanise kutanga (paMabasa avaApostora). Ichi ndicho chakabva chazoramba chiri chimiro chinoda kuteverwa nekereke yenguva yekupedzisira.
GENESISI 1:5 Mwari akatumidza chiedza, akati Masikati, nerima akaritumidza akati Usiku. Madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva rimwe.
Zuva rinotanga madeko roenderera kusvika mangwanani anotevera. Nei?
Chiedza ishoko raMwari.
MAPISAREMA 119:105 Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, nechiedza chenzira dzangu.
Shoko raMwari vakatenda mariri pakereke yekutanga asi vakazorasika kubva pariri nguva yerima. Rakambonzi dzorwei mumazuva erumutsiridzo akatangwa naLuther paaiparidza kuti vanhu vaponeswe uye munguva yemaMishinari paiparidza Wesley, aiparidza hutsvene uye aipota nenyika achiparidza rumutsiridzo rwePentecosti urwo rwakaunza kubatazve kweMweya Mutsvene. Asi hapana imwechete yemutsiridzo idzi yakagona kudzosera kunzwisiswa kwezvakavanzika zvaMwari zviri Mumagwaro.
Chivi chekutanga chaive chii? Mbeu yechikara chakazoshandurwa kuita nyoka chimbori chii? Chikara ndiani? Mufananidzo wechikara chii? Zita raMwari ndiani? (Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene harisi zita) nezvimwe zvakadaro.
ZEKARIA 14:7 Asi richava zuva rimwe rinozivikanwa naJehova, hapangavi namasikati kana vusiku, asi nenguva yamadekwana chiedza chichava’po.
Asi chokwadi chakadzoserwa panguva yemadekwana kupfurikidza hushumiri hwehama William Branham. Nguva yekudzoka kwaMwari isati yasvika.
Vakafa muna Kristu makore 2 000 enguva dzemakereke vachamuka avo vari kurarama maari vachiri vapenyu vachashandurwa. Saka vanotenda vechokwadi vachave panyika kwekanguvana Kristu asati adzoka.
Chiedza chichena chakagadzirwa nendudzi nomwe dzeruvara. Saka Mwenga waKristu achabva mumakereke manomwe ndiye akamiririra chiedza chechokwadi panyika.
Asi chiedza hachisangani nerima, nguva yekutambudzika inomiririra rima.
Saka kunozouya husiku hwekutambudzika husingazosangani nemwenga nekuti anenge atotorwa akwira kudenga. Ndiko kusaka vhesi 5 raGenesisi 1 risingatauri nezvehusiku.
Mangwanani anozotevera eMereniyamu apo Kristu neMwenga vanodzoka, nyika yozotongwa naKristu, anova chiedza, kwemakore 1 000.
ZVAKAZARURWA 20:6 Munhu unomugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa, mutsvene; rufu rwechipiri harunesimba pamusoro paivava; asi vachava vaPirista vaMwari naKristu, vachabata vushe pamwe naye makore ane gumi ramazana.
Mwari akasika hupenyu panyika pamazuva matanhatu aMwari (makore 6000). Mwanakomana waMwari (Adam) nemudzimai wake ndivo vaifanirwa kuzotonga nyika nezuva rechinomwe remakore 1000. chikamu ichi chehurongwa hwaMwari chakaparadzwa nechivi. Saka apo Jesu Mwanakomana waMwari nemwenga wake (kereke yechokwadi) vachatonga panyika kwamakore 1000 vanenge vachizadzisa hurongwa hwaMwari hwepakutanga. Mereniyamu iyi ndiyo zuva rechinomwe rechokwadi.
Mwari akaita murairo muTestamente yekare asi waivepo semunongedzo kana kuti mumvuri wechiitiko chakadzama, Testamente Itsva, zvakazarurwa zvenyasha.
Murairo wekare waive wakaomarara nekuti ndiwo musikirwo wemurairo kuti unenge usiri nyore kurarama pasi pawo.
Vanhu vaida kuedza kurarama pahwaro hwaMwari nemabasa ake uye nesimba rake.
Ropa remhuka raiunza kuregererwa asi raisakwanisa kubvisa rudo rwekutadza mumunhu. Hupenyu kana mweya wemhuka waigara muropa rayo waisakwanisa kugara mumoyo wemunhu kuti ubvise zvido zvekukanganisa.
Nyasha dzakaunza Ropa raJesu kuti ribvise uye kugeza zvivi uye chivimbiso cheMweya Mutsvene icho chaive hupenyu hwairarama muRopa raJesu.
Mweya Mutsvene waizopinda mukati memoyo yedu wobvisa rudo rwekutadza woita kuti tide kurarama hupenyu huri nani. Tisingatori Bhaibheri sehurongwa hwemirairo inopikisana nezvatiri asi semweya mutsvene unogara matiri unoshandura zvido zvedu kuti tigare muhuvepo hwaMwari.
Tinofanira kuita kuda kwaMwari. Zvakare tinofanira kumuda kupinda zvimwe zvinhu zvose tobva tada kumuteerera nekumutevera. Kwete zvichibva pakumanikidzwa asi parudo rwedu kwaari. Kwete nekuti tinofanira asi nekuti tinoda.
VAHEBHERU 8:10 Nekuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri kana mazuva iwayo apfuura, ndizvo zvinotaura Ishe; ndichaisa mirairo yangu pakufunga kwavo, napamoyo yavo ndichainyora, ndichava Mwari wavo; ivo vachava vanhu vangu.
"Mirairo" inotaura pamusoro pekuva munhu anokwanisa kuzvidzora mukufunga kana "mumoyo" yedu zvichitaura pamusoro pezvido zvedu.
Zvido zvedu zvinozoenderana nezvinodiwa naMwari nehurongwa hwake, kana tikatendera Mweya uyu kuti ugare mumoyo yedu unotinatsa kubva kuzvivi uye unotipa hunhu hutsva hwekuda kutevera Izwi rake.
Sabata chikamu chemurairo waMwari.
Murairo pachawo wakarurama.
MAPISAREMA 19:7 Murairo waJehova wakakwana, unoponesa mweya; chipupuriro chaJehova ndechazvokwadi, chinopa vasina mano njere.
Hapana chakakanganisika pamurairo, wakakwana.
Dambudziko riripo pamurairo nderekuti kunyangwe tikauteerera tikauita sezvauri, hautiite vakarurama.
Murairo chinhu chakanaka asi isu vanhu vasina kururama hatikwanisi kunyatsouita sezvauri.
VAHEBHERU 7:19 Nokuti murairo hauna kukwanisa chinhu, zvino tariro, inopfuura nokunaka, ikaiswapo, yatinoswedera nayo kuna Mwari.
Murairo waive mutsetse wezvinodikanwa kuti titevere izvo zvaikwaniswa kuitwa nemaKristu ese.
Murairo waive munongedzo kana kuti mumvuri wechimwe chokwadi chakadzama.
Gwayana rimwe-nerimwe raipiwa sechibairo rainongedza kuna Kristu, Gwayana rechokwadi.
Ropa regwayana raikwanisa kubvisa zvivi asi raisakwanisa kushandura hunhu hwemutadzi.
Ropa raKristu rinokwanisa kubvisa nekugeza zivi zvinova zvakanakisa kupinda ropa remhuka. Hupenyu hwaive muRopa rake hunobva hwauya mumoyo yedu seMweya Mutsvene wobvisa kwatiri rudo rwekutadza.
VAHEBHERU 10:1 Nokuti murairo zvaunomumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya, usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo, haungatongogoni kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe-nerimwe naizvozvo zvibairo zvavanoramba vachibaira Mwari.
Murairo waive mumvuri. Mumvuri unokuratidza chimiro chechinhu asi mumvuri hachisiri chinhu chacho.
Murairo waifanirwa kuramba uchidzokororwa. Kana uchifanira kuramba uchimwa mushonga zvinoratidza kuti mushonga wacho kunyange wambonzwa zviri nani hauna kukurapa.
Calvari nekufa kwaKristu pamuchinjiko zvakaripa zvivi zvachose. Hazvidi kudzokororwa. Dzokororo yekuzorora kubva pabasa Mugovera wega-wega waingove mumvuri wezororo rechokwadi, apo Mweya waMwari waizogare matiri.
ISAYA 42:21 Zvakafa Jehova, nokuda kwekururama kwake, kukudza murairo nekuurumbidza.
Hapana chakaipa pamurairo asi waive wakaiswa miganhu pekuti waingove munongedzo kana kuti mumvuri. Murairo wakawana zvawaireva chaizvo apo wakaratidzwa munaKristu sekuzadziswa kwawo. Kristu akauya kuzozadzisa murairo nekuupa chirevo chakadzama. Ndiye Gwayana rechibairo rechokwadi. Ndiye muPrista Mukuru wechokwadi.
Zvakaenderana nekunge tatendera Kristu kurarama mukati memoyo yedu, Iye anotipawo chirevo nechinangwa chakadzama muhupenyu hwedu.
MATEO 5:17 Musafunge kuti ndakauya kuzoparadza murairo kana vaporofita, handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa.
Murairo waisakwanisa kusunungura nekuponesa vanhu. Murairo wainongedzera kuna Kristu.
Kristu ndiye Muponesi. Ndiko kwaive kuzadziswa chaiko kwemurairo.
Nyasha dzakatendera Muponesi Mukuru uyu kuti agare matiri kuitira kuti atiite chikamu chehurongwa hwake hukuru hwedzikinuro.
VAGARATIA 3:10 Nokuti vose vari vamabasa omurairo, vari pakutukwa; nekuti kwakanyorwa kuchinzi; Vakatukwa vose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurairo, kuti vazviite.
Hatikwanisi kuponeswa nemabasa edu akanaka, nekuti isu vanhu hatikwanise kuchengeta mirairo yose.
Semuenzaniso Kristu akataura pachena kuti zvaisagoneka kuti munhu wese ashaiwe chaanoita musi weMugovera. Vaparidzi vaifanirwa kuti vaparidze. Zvipfuyo zvaifanirwa kutaririrwa. Zvinotiwira zvakaita senjodzi zvaifanirwa kugadziriswa. Nemamwe mazuva emwedzi akazoramba achiwedzerwa kuitwa maSabata. Kunyangwewo Svondo rakabuda paviri sezuva rakakosha rekunamata.
VAGARATIA 3:13 Kristu wakatidzikinura pakutuka kwemurairo, iye akaitwa chakatukwa nekuda kwedu, nokuti kwakanyorwa, kuchinzi; Vakatukwa vose vanoturikwa pamuti.
Kristu haana kutidzikinura kubva pamurairo. Akatidzikinura kubva pakutukwa kwemurairo. Kutuka kwemurairo ndekwekuti unotiudza kuti chivi chii asi haukwanisi kutidzivisa pakuita chivi.
Murairo wakapiwa miganhu. Kunyange ukatiratidza chakanaka, tinokwanisa chete kuchiita kupfurikidza nehunhu hwedu kana tichikwanisa kuzvidzoreredza. Tingori isu vanhu venyama tiri kuedza zvikuru sei kufadza Mwari. Tinofanirwa kumuteerera nekuita zvaanoda kuti tigowana kubvumira kwake pamusoro pezvatinoita. Izvi zvinototipa kuti tive vanoteerera kunyangwe taikwanisa kusadaro. Uyu ndiwo muganhu mukuru unoiswa nemurairo.
Tinofanira kushandura hunhu hwedu hwemukati kusvikira tave nechido chekurarama kupfurikidza Shoko raMwari. Mwari seMweya Mutsvene , anogara matiri oita kuti tide kurarama muShoko rake. Hatiite netarisiro yemubairo (Denga) kana kuti nekutya kurangwa (gehena). Tinoita nekuda kwekuti tinoda kurarama kunofadza Mwari.
JEREMIA 31:33 Asi heyi sungano yandichaita neimba yaIsraeri shure kwamazuva iwayo, ndizvo zvinotaura Jehova, Ndichaisa murairo wangu mukati mavo, ndichaunyora mumoyo yavo, ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu.
Kuzvarwa patsva zvinoreva kuti Mwari asika zvido zvitsva mukati memoyo yedu nekuti ari kurarama mukati medu.
Tinoita mabasa ake nekuti anotitungamirira uye anotiita kuti tide kuita kuda kwake.
Hatichazoteveri mazano kana shuviro dzedu kana kuzoita mabasa edu enyama.
Mabasa akanaka haana kukwanira pachawo, anofanirwawo kukwanira pahurongwa hwaMwari hukuru kwatiri.
VAROMA 7:6 Asi zvino takasunungurwa pamurairo, takafa kuna izvozvo zvatakanga takasungwa nazvo; naizvozvo tinobatira Mwari nomweya mutsva, tisingabatiri nezvakanyorwa zvakare.
VAROMA 8:2 Nokuti murairo woMweya wovupenyu munaKristu Jesu wakandisunungura pamurairo wezvivi noworufu.
Mweya waKristu unotishandura zvikuru wotiita kuti tide kuita zinodiwa naMwari.
Murairo unoita kuti titeerere Mwari asi hautiite kuti tizvipire kuita nekuda kwemoyo yedu.
DEUTERONOMIO 6:4 Chinzwa Israeri, Jehova Mwari wedu ndiJehova mumwechete.
5 Ude Jehova Mwari wako noMoyo wako wese, nomweya wako wose, nesimba rako rose.
Isu maHedeni takabva pamarudzi ekusatendai anotenda muvamwari vazhinji. Saka zviri nyore kuti tinyengerwe tichinzi mune vanhu vanodarika umwechete muhuMwari.
Kunyangwe kana tiine rudo naMwari tinotambudzwa nekuzvida isu pachedu, nerudo rwezvemapfekero, rudo rwetunhu kana pfuma yepasi rino, rudo rwekuwana mubairo, rudo rwekuva nembiri nezvimwe zvakadaro.
Tinoda Jesu mumoyo medu kuti aite kuti tizive kuti ndiye Mwari. Ndiye oga anokwanisa kutiita kuti timude nemoyo yedu yose sezvatakafanira kuita.
NEHEMIA 13:19 Zvino pamasuo eJerusarema pakati posviba, Sabata risati rasvika, ndakaraira kuti mikova ipfigwe, kuti irege kuzarurwazve kusvikira Sabata rapfuura, ndikaisa vamwe varanda vangu pamasuwo, kuti mitoro irege kupinzwa pazuva reSabata.
Mitoro haisi chikamu chezororo reSabata.
MATEO 11:28 Vuyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, Ini ndichakuzorodzai.
Jesu aisavimbisa vakaremerwa zororo pamusi weMugovera. Vaiva vatova naro.
Mutoro wedu mukuru chivi. Tinoda Jesu kuti ageze zvivi zvedu zvose uye kusatenda kwedu kwese. Kana zvadaro tinenge tave kukwanisa kuwana zororo maari.
MATEO 11:29 Muise joko rangu pamusoro penyu, mudzidze kwandiri nekuti ndiri munyoro ndine moyo unozvininipisa kuti muwane zororo pamweya yenyu.
Jesu anotivimbisa zororo kubva kuzvivi. Mweya yedu hainete. Asi muviri ndiwo unoneta.
Asi mweya yedu haiwane zororo muhupenyu huzere zvivi.
ISAYA 58:13 Kana uchidzora gumbo rako pamusi weSabata, kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti, Sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene raJehova rinofanira kukudzwa, uchirikudza, usingaiti zvaunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutaura mashoko ako.
Zvaunoda hazvisi chikamu chesabata. Hatiwani zororo rechokwadi remweya kana tichiita zvinotifadza.
ISAYA 66:1 Zvanzi naJehova, kudenga ndicho chigaro changu choushe nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu; mungandivakira imba yakadiniko? Ndeipiko nzvimbo pandingazorore?
Mwari anoda kurarama mumoyo yedu.
Mwari haangazorore mumoyo yedu kana tikashingirira pakuda kuzadzisa zvinangwa zvedu.
ISAYA 11:2 Mweya waJehova uchagara pamusoro pake. Mweya wenjere newokungwara, mweya wamano nesimba, mweya wekuziva nekutya Jehova.
Mumuviri waJesu ndimo makaita mekutanga kugara Mweya uzere waMwari ukava nezororo rakakwana nekuti semunhu, akakwanisa kuteerera mweya waMwari wairarama maari.
Motokari inofanira kuita zvinodiwa nemutyairi. Isu tiri motokari dzinoda Mwari kuti ave mutyairi wadzo. Mwari haakwanisi kuvimba nesu kana kuzorora matiri kana tisati tapa hupenyu hwedu kwaari uye toita sekuda kwake tisingatsutsumwi kana kugunun'una.
MATEO 26:39 Akapfuura mberi zvishomanene, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti; Baba vangu kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuvure kwandiri, kunyangwe zvakadaro kurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu.
ISAYA 63:14 Mweya waShe Jehova wakavazorodza, semombe dzinoburukira kumupata saizvozvo makafambisa vanhu venyu, kuti muzviwanire mukurumbira mukuru-kuru.
Zororo rinoyanana neMweya waMwari.
Zororo rinoda kuti isu tizvipire kupa kuda kwedu kuna Mwari, totambira kuda kwaMwari toita saizvozvo.
ISAYA 28:11 uchataura norudzi urwu navanhu vane miromo yorumwe rudzi, norurimi rwekumwe.
12 Akati kwavari; zororo riri pano, zorodzai vakaneta; pano ndipo panokutonhorera; asi vakaramba kuteerera.
Izvi zvairevera zuva rePentecosti apo vakataura nedzimwe ndimi.
Mweya Mutsvene wakapinda mumoyo yevanhu pazuva iroro. Izvi ndizvo zvakaita kuti vadzidzi vave kereke yechokwadi.
MABASA AVAPOSTORA 2:1 Zvino zuva rePentecosti rakati rasvika, vakanga vakaungana vese pamwechete panzvimbo imwe.
2 Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kwakazadza imba yose yavakanga vagere.
3 Vakaonavo ndimi dzichiparadzana, dzinenge dzomoto; ndokumhara pamusoro woumwe noumwe wavo.
4 Vose akazadzwa noMweya Mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, pavakapiwa napo neMweya kureva.
MAPISAREMA 95:11 Saka ndakapika pakutsamwa kwangu, ndikati; Havangazopindi pazororo rangu.
MaJuda aichengetedza zororo rezuva reMugovera zvakanyanyisa. Asi iri raive risiriro zororo chairo.
Kristu ndiye aive zororo chairo kubva pazvivi nekuti ndiye ega aikwanisa kuripira zvivi zvose.
Asi vaisakwanisa kuwana zororo iri nekuti vakasarudza kumuramba vakamuuraya pane kumugamuchira.
JOHANI 12:32 Neni, kana ndasimudzwa panyika, dichakwevera vese kwandiri.
Jesu akasimudzwa pamuchinjikwa. Pakati peDenga nenyika. Zvaive zvakafanana nemureza uyo unosimudzwa kuti vanhu vaone, zvimwechete nerufu rwake rwakaitika kuti vanhu vaone musiwo wekubva panyika kuenda kudenga.
ISAYA 11:10 Nezuva iroro mudzi waJese, (Jesu Mwanakomana waDavidi uyo aive mwanakomana waJese) Iwo umirepo semureza (mureza wakasimudzwa ... Jesu akasimudzwa pamuchinjiko) wavanhu, uchatsvakwa namarudzi avanhu; nzvimbo yake yekuzorora ichava nembiri. (Ropa rake rakasuka zvivi zvedu neMweya Mutsvene wake, hupenyu hwaive muropa rake hunouya kuzogara mumoyo yedu hwobvisa rudo rwekuita zvivi. Kana tava pachikamu ichi ndipo pega patinenge tazorora kubva pazvivi zvedu.)
Muponesi akarovererwa, akarambwa nemaJuda, aizogamuchirwa nemaHedeni.
Vanhu vaizotendeuka vobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu vozadzwa neMweya Mutsvene. Iri ndiro zororo chairo kubva kuzvivi.
ISAYA 42:21 Zvakafadza Jehova, nokuda kwekururama kwake, kukudza murairo nekuurumbidza.
VAGARATIA 3:2 Ichechi bedzi ndinoda kunzwa kubva kwamuri: makapiwa mweya namabasa omurairo here, kana nokunzwa kwokutenda?
Kana tichiziva nekutenda zvinotaura murairo (Testamente Yekare) zviri nyore kuti tizive kuzadziswa kwawo muTestamente Itsva topfuurira mberi kunoona kuzadziswa kwawo muMweya nezvirevo zvawo zvakadzama.
VAGARATIA 3:5 Naizvozvo uyo unokupai Mweya, nokuita mabasa esimba pakati penyu, unozviita izvo namabasa omurairo here kana nokunzwa kwokutenda?
Zvishamiso zvinoitika kupfurikidza nekutenda uye nenyasha dzeMweya ugere mukati mamuri, kwete nemabasa akanaka.
VAROMA 6:15 Zvino tichatiiko? Titadze nekuti hatizi pasi pemurairo here, asi pasi penyasha? Haisa!
Nyasha dzinoda mabasa akanaka, sezvaaingodiwawo nemurairo. Kuti tinotadza nekuti Mwari anotiregerera zvakafanana nekuti Mwari haararami matiri. Mwari haana kubvira ada chivi.
Asi chatinoti chivi chaicho kusatenda.
Mabasa ese ezvivi (kubhema, kudhakwa, kunyepa, kuba, etc) zvingori zvibereko zvekusatenda.
JOHANE 16:8 Iye kana asvika, achazivisa nyika pamusoro pezvivi, napamusoro pekururama, napamusoro pokutongwa;
9 Napamusoro pezvivi nekuti havatendi kwandiri.
Kana tichitenda muna Mwari pachokwadi hatiwanikwi tichiita zvese izvi.
Mweya Mutsvene wega, ndiwo unogara mukati memoyo yedu, ndiwo unokwanisa kubvisa kusatenda kwese uye wotiratidza chokwadi.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, Iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose; nokuti haangataure zvake, asi zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya.
Kuedza kutsvaga chokwadi chese pachedu hatingazvikwanisi. Takapiwa miganhu mizhinji nekusaziva kwedu, tsika dzedu, chinyakare chedu, kuzvikudza kana kuzvida, nezvimwe zakadaro.
Kugona kuzvidzora kupfurikidza murairo kunokwanisa kutibatsira kuti tirege kutadza asi hakukwanisi kutibvisira rudo rwekutadza mukati memoyo yedu.
Kuzvidzora kupfurikidza kutevera murairo hakukwanisi kuvhura meso edu kuti tione kuzadziswa kwakadzama kwemurairo muTestamente Itsva.
Mweya Mutsvene wega ndiwo unokwanisa kubvisa kwatiri rudo rwekuita zvakaipa. Mweya Mutsvene wega ndiwo unokwanisa kuvhura maziso edu wotizivisa zvirevo zvemweya zvezvinhu zvese zviri mumurairo wotiratidza zvazvinomiririra.
JOHANE 16:21 Mukadzi kana achipona, unonzwa shungu, nokuti nguva yake yasvika; asi kana apona mwana, haachafungi kutambudzika, nokufara kwake nokuti munhu waponerwa panyika.
Mwana haana zvaanoita kuti azvarwe. Saka mabasa edu enyama kana kushingirira kwedu hakuunzi zororo kana kuzvarwa patsva.
MaJuda aichengetedza Sabata reMugovera asi haana kupinda muzororo rechokwadi.
Vakakundikana nekuda kwekushaiwa kutenda.
Kusatenda ndicho chivi chikuru. Kushaiwa kutenda ndiro tsime rezvivi zvose.
Kusatenda kunotangira mumweya yedu apo pfungwa dzinotanga kufunga zvakashata, mifungo yedu inobva yatikurudzira kuita chakashata panyama yedu. Zvivi zvose zvatinonyatsoziva kuti tinoita (kuputa, kunwa kupomba nezvimwewo) zvingori zvibereko zvekusatenda. Kana tikatenda pachokwadi, hatiite zvakaipa zvakare.
JOHANE 8:24 Naizvozvo ndakati kwamuri; muchafira muzvivi zvenyu, nokuti kana musingatendi, kuti ndini Iye, muchafira muzvivi zvenyu.
Kana tisingatendi tiri vatadzi.
Hatiwani zororo rechokwadi kana tikaramba tichitadza nekuti zvivi zvedu zvinotiparadzanisa naMwari.
ISAYA 59:2 Asi zvivi zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu, zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake, kuti arege kunzwa.
Tinokwanise kuzorora pamabasa emaoko asi pandangariro dzedu hatingawani zororo kana tichirarama muzvivi.
MAPISAREMA 38:3 Hakuchina hukukutu panyama yangu nokuda kwehasha dzenyu; uye hapachina mufaro pamapfupa angu nekuda kwechivi changu.
Saka Sabata chairo izororo kubva pazvivi.
Tingazvigone sei izvi?
VAHEBHERU 4:5 Napano zve: Havangapindi muzororo rangu.
6 Naizvozvo, shoko zvarichipo kuti vamwe vachapinda pariri, uye kuti avo vakaparidzirwa Evangeri kare havana kupinda nekusaterera kwavo.
Mwari ane nzvimbo yekagadzirirwa isu kuti tizorore ndokunge kana tichitenda maari.
Tinopinda pazororo nekutenda kana Mweya waMwari wapinda mumoyo yedu.
Kusatenda chete ndiko kuchatitadzisa.
VAHEBHERU 4:11 Naizvozvo ngatishingirirei kuti tipinde muzororo irere, kuti munhu arege kuvapo unozowa achitevera nzira iyo yekusaterera.
Kusatenda kunotitadzisa kupinda muzororo chairo nekuti vasingatereri havagamuchiri Mweya Mutsvene unovaita kuti vazvarwe patsva.
Zvatabva kunzwa apa zvinoita sekukakavara; "hapana zororo pasina kutambudzika".
Asi izwi rekuti "kutambudzika" rinotiyeuchidza nezvekutambudzika pakuzvara mwana.
Saka zvinotipa muono wechiitiko chekuzvarwa patsva.
JOHANE 16:21 Mukadzi kana achipona unonzwa shungu, nokuti nguva yake yasvika, asi kana apona mwana haachafungi kutambudzika, nokufara kwake nokuti munhu waponerwa panyika.
Amai vanenge vari pakutambudzika kusvikira kupona mwana kwapera. Vanobva vazorora kubva pakutambudzika kwavo , kutambudzika kwavo kunenge kwapera.
Tinotambudzika kuti tikunde chivi kusvikira Mweya Mutsvene wapindira, washandura zvido zvemoyo yedu kuti isu tisazode kutadza zvakare.
EKSODO 20:8 Rangarira zuva reSabata, kuti urichengete rive dzvene.
9 ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose;
10 asi zuva rechinomwe iSabata raJehova Mwari wako; usatongobata mabasa naro, iwe, kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, kana muranda wako kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako ari mukati mamasuwo ako,
11 nekuti namazuva matanhatu Jehova wakaita denga napasi, negungwa, nezvose ziri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe; naizvozvo Jehova akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene.
Tanhatu chiverengo chemunhu.
Munhu akasikwa zuva rechitanhatu. Tinokundikana kusvika pakupedzisira panove panomwe.
Nei? Nekuti tizere nezvivi mukurarama kwedu.
Saka chiverengo "chechitanhatu" chinoratidza kuti mabasa emunhu anodzikisirwa nemabasa ezvivi nekuda kwekuti takazongozvarwa tave vatadzi.
Sevanhu venyama hatikwanisi kuona mucherechedzo mukuru, tinozvida zvakanyanya uye tinozvikudza zvikuru.
Mazuva matanhatu anomiririra zvekare makore 6000 ekubata kwemunhu panyika.
Mwari akasika paradiso asi munhu akasarudza kutadza zvakaparadza Edeni raMwari uye nhoroondo yemunhu inoratidza kuti munhu pachake haakwanisi kugadzirisa matambudziko ake ega kunyangwe maduku chaiwo, zvakare kunyangwe munhu akashandisa pfungwa zvakadzama sei haakwanisi kusika paradiso panyika.
Saka Mwari anoda kutisunungura kubva kuzvivi.
NeMweya wake neRopa Rake kwete nemabasa edu.
Kushanda kwemazuva matanhatu chiratidzo chemabasa emunhu. Mabasa aya ese anopera.
Saka tinofanirwa kuponeswa, torarama tiri vatsvene kuti tizadzwe neMweya Mutsvene.
Uku ndiko kwatinoti kuzvarwa patsva, tinenge tave kurarama muMweya waMwari.
Tinobva tasiya kurarama zvatinoda isu topa Mweya waMwari mukana wekurarama matiri zvachose kuti utiratidze nzira nhano nenhano yekufamba kwedu.
VAKOROSE 1:27 Kunaivo Mwari waakada kuvazivisa vufumi hwokubwinya kwechakavanzika ichocho pakati pavahedheni, chokuti, Kristu mukati menyu, tariro yekubwinya.
Kristu ega ndiye anokwanisa kuregerera zvivi.
ZVAKAZARURWA 1:5 Nokuna Kristu, chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika, iye akatida akatisuka, pazvivi zvedu neropa rake Ameni.
ISAYA 64:6 Nokuti isu tose tave soune tsvina, kururama kwedu kwese kwafanana nenguvo ine tsvina; isu tose tinooma seshizha, zvakaipa zvedu zvinotibvisa semhepo.
Mabasa akanaka atinoita haakwanisi kutisuka kuzvivi.
REVITIKO 23:3 Mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu; asi zuva rechinomwe iSabata rekuzorora kwazvo, iungano tsvene; musaite basa ripi neripi; iSabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose.
Hakuna mabasa akanaka atingaite angatiwanise ruponeso.
VAEFESO 2:8 Nokuti makaponeswa nenyasha, nekutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari.
9 Hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nemunhu anozvikudza.
VAROMA 7:18 Nokuti ndinoziva kuti mukati mangu, imo munyama yangu, hamugari chinhu chakanaka; nokuti kuda kuripo kwandiri , asi kuita zvakanaka hakupo.
Tinofanira kuramba kuda kwedu kuitira kuti kuda kwaMwari kugare nekurarama muhupenyu hwedu.
VAFIRIPI 2:13 Nokuti ndiMwari unobata mukati menyu kuti mude uye muite kuda kwake kwakanaka.
Zororo rinowanikwa chete kana kuita kwedu nezvinangwa zvedu zvikasarwisana.
Hatikwanisa kuponeswa nemabasa edu. Nekuti tinozova vadadi tichizvikudza pamusoro pemabasa iwayo.
Izvi hazvirevi kuti mabasa akanaka haana kukosha. Asi mabasa akanaka atinoita hatifanirwi kumaita isu. Mabasa aya anofanirwa kuva akakurudzirwa neMweya Mutsvene unogara nekurarama matiri uchitiratidza nzira.
JAKOBO 2:18 Asi umwe ungati: Iwe unokutenda neni ndina mabasa ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa, neni ndigokuratidza mabasa angu kutenda kwangu.
JAKOBO 2:22 Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete namabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa nemabasa.
JAKOBO 2:24 Munoona munhu unoruramiswa namabasa, haaruramiswi nekutenda bedzi.
Pasina mabasa akanaka, kutenda kwedu kunenge kusina kukwanira.
Kutenda kwedu kunofanirwa kutigonesa kuita mabasa akanaka.
Mabasa edu anoonekwa chiratidzo kana kuti mufananidzo wekutenda kwedu kusingaonekwi.
Kutenda kunotipa hupenyu asi mabasa akanaka anochengetedza hupenyu ihwohwo.
Kutenda kwakafanana nehunyoro hunopa hupenyu mumuti. Mabasa akanaka akafanana negavi rinochengetedza hunyoro mumuti. Ukabvisa gavi nehunyoro hwemuti hunooma muti wacho unobva wafa.
Jesu ega ndiye anokwanisa kukukurudzira kana kukutungamirira kuti azadzise hurongwa hwake hwakakwana mauri.
Mwari ega ndiye anoziva chaanoda kuti umuitire.
VAHEBHERU 10:7 Zvino ndikati: Tarirai, ndavuya, (murugwaro makanyorwa pamusoro pangu) kuti ndiite kuda kwenyu, imi Mwari.
Tinofanira kuita izvo zvakanyorwa muBhaibheri chete, chii chakanyorerwa kereke yatiri kurarama tiri nhasi?
8 Zvaanoti pakutanga: Zvibairo nezvipo, zvezvibairo zvinopiswa, nezvibairo zvezvivi hamuna kuzvida, hamuna kufadzwa nazvo (zviri izvo zvinobairwa Mwari sezvinoreva murairo.)
9 Ndokuzoti: Tarirai, ndinouya kuzoita kuda kwenyu imi Mwari. Unobvisa chokutanga kuti amise chechipiri.
Chinangwa chedu panyika yaMwari ndechekuita kuda kwake kwete kuda kwedu.
Chibairo chaungape kuna Mwari chikuru chine chiremera ndechekuramba kuda kwako wotambira nekuita kuda kwaMwari pamusoro pehupenyu hwako nekuda kwake panyika pano.
Kana tisingashandi musi wemugovera nechinangwa chekuchengetedza Sabata pachinzvimbo chekuzadzwa neMweya Mutsvene uyo unotiita kuti tizorore kuzvivi nekubva pakusaterera, zvinoreva kuti hatisati tanzwisisa chinangwa chaMwari chemuTestamente Itsva.
Zvinoreva kuti Mwari haasi kutyaira hupenyu hwedu uye haakwanisi kunyatsotitungamirira kunopinda muchokwadi chizere uye muhurongwa hwake hwakakwana.
Murairo unosanganisa Sabata remugovera, asi une mimwe miganhu maererano nenguva.
REVITIKO 25:4 Asi pagore rechinomwe nyika inofanira kuzorora kwazo , rive Sabata kuna Jehova; usadzvara munda wako , kana kugurira midzambiringa yako.
Sabata haringorevi zuva chete, rinokwanisa kurevawo gore.
Apa riri kureva minda. Minda inofanira kuzorora kwegore rese. Kuzorora kweminda kwegore rese apo inenge isina kurimwa hakunei neMugovera. Nekuda kwechivi Mwari akatuka nyika. Kunyangwe nyikawo inoda kuzorora kubva pakurimwa nekupa goho.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati, Zvawakaterera izwi remukadzi wako , ukadya muti wandakakuraira ndichiti, usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose ovupenyu hwako;
18 Ichakuberekera minzwa nerukato, iwe uchadya miriwo yemusango.
19 Uchadya zvekudya zvayo neziya rechiso chako kusvikira wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokera kuguruva.
Nekuda kwechivi chekutanga, nyika yakatukwa. Iyezvino nyika yave kukudza chikafu chakanaka, minzwa nerukato ( tsangadzi) nezvimwewo.
Kurima nhasiuno kutambudzana netsangadzi uye hudyi.
Munhu zvese nenyika zvinotokwinya kuti pagobuda chikafu. Zvese zvinoda zororo. Munhu zuva rechinomwe rega-rega, munda gore rechinomwe rega-rega.
Asi kana chivi chazobviswa pekupedzisira, kutukwa uku kuchabviswawo.
Zvino kunenge kusisina basa rakaoma uye panenge pasisina chikonzero chezuva rekuzorora kana gore rekuzorora. Asi kusvikira panguva iyoyo tinotoda zororo kubva pabasa remaoko ratisingakwanisi kusiya asi tinokwanisa kuwana zororo risingaperi kubva pashuviro dzekutadza kana Kristu agere mukati memoyo yedu.
Kuripira zvivi. Jesu akadikitira ropa mumunda weGetsimani. Dikita raive chikamu chekutuka kwaMwari apa dikita rakasangana neropa raJesu.
RUKA 22:44 Zvino ari pakutambudzika kukuru, akanyanya kunyengetera ; ziya rake rikaita samadonhwe eropa, akadonhera pasi.
Minzwa yakapfekedzwa mumusoro make sekorona.
Minzwa yaive chikamu chekutuka kwaMwari zvino minzwa yakasangana neRopa raJesu.
MATEO 27:29 Vakaruka korona yeminzwa ndokuiisa pamusoro wake, norutsanga muruvoko rwake rworudyi. Vakapfugama pamberi pake vakamuseka vachiti, Kwaziwai Mambo wavaJuda.
MaJuda vakamuvenga zvikuru zvekuti vakamutora vakaenda naye kunze kweguta vakanomurovera ikoko pachikomo cheCalvari. Nenzira iyi Ropa raJesu rakaerera richipinda panyika kwete munzira dzakavakirirwa nematombo dziri muguta asi muvhu.
Mwari akatuka nyika, Ropa raJesu rakaererera panyika richipinda muvhu renyika.
Saka dikita, minzwa nenyika zvose zvakabatwa neRopa raJesu kusunungura kutukwa kwakaitwa mumunda wedeni.
Saka munguva inouya hakuzovi nekutukwa zvakare. Nyika pasina kutambudzika ichatipa chekudya zviri nyore sezvo kunenge kusisina minzwa nerukato (tsangadzi) kana zvipfukuto nezvimwewo.
Parizvino kana moyo yedu yabatwa neRopa raJesu, tinokwanisa kuwanawo kanganwiro yaMwari tozorora kubva kuzvivi.
Nyika haisi nzvimbo yakanaka kunguva.
Kana zuva rikakudokera , rinenge richibudawo kune rumwe rutivi rwenyika.
Nguva chinhu chinopfuura haigari nekusingaperi.
Kwekupedzisira kunenge kusisina nguva patinova chikamu chekurarama nekusingaperi.
Uyu ndiwo mumwe muganhu wenguva pamurairo, zvinosanganisa Sabata rinotibata paupenyu huno chete kwete pahupenyu hunotevera kumashure kwerufu.
VAROMA 7:1 Hamuzivi here, hama dzangu, (nokuti ndinotaura nevanhu vanoziva murairo) kuti murairo unobata munhu nguva yose yevupenyu hwake?
Murairo haubati pahupenyu hunotevera kushure kwerufu kana ukafa ukaenda kudenga, unonoona kuti hakuna Mugovera ikoko, sezvo nguva chinhu chakaziviswa nyika naMwari kudenga hakuna nguva.
Hakuna husiku kudenga.
Hapana pakataurwa nezvekuti kudenga kunorarwa hope muBhaibheri.
Kuna Zvakazarurwa chitsauko 10 apo ngirozi tsvene dzinouya pasi panguva yerumuko, kuzomutsa vakafa nekushandura vapenyu vachitora muviri usingazofi zvakare, kuitira kuti Mwenga waKristu agokwanisa kukwira kudenga kumabiko emuchato, ndipo panopererawo kubata kwenguva pavatsvene vanenge vamutswa ava (sezvo nguva haingabati kwauri kana wava nemuviri usingazofi).
Nguva sezviri murairo chinhu chinoguma , chinongoita basa racho kwekanguvana.
Nguva ichaguma apo hupenyu husingaperi pahunotanga.
ZVAKAZARURWA 10:5 Ipapo mutumwa uya wandakaona amire pamusoro pegungwa napamusoro penyika, wakasimudzira ruvoko rwake rwerudyi kudenga,
6 akapika naiye uri mupenyu nekusingaperi-peri, wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo, kuti nguva haingazovipo.
Saka zvirokwazvo nguva haichazovepo nekuti haisi chikamu chehupenyu husingaperi.
Takazvarwa tikakurira munguva saka hatingakwanisi kunyatsonzwisisa kuti Mwari akangogara akadaro haashanduke nenguva sezvatinoita. Tinofanirwa kusikwa kumuviri mutsva kuti tikwanise kurarama nekusingaperi. Apa nguva dzinenge dzisisina zvadzinoreva kwatiri.
Pakunenge kusisina nguva zvachose, chikamu cheMugovera chinenge chadarikawo.
Muguta rekupedzisira, Jerusarema idzva, kunyangwe chikamu chechiyedza chezuva chinenge chadarikawo. Zvinhu zvese zvinobatika zvingori mimvuri yechokwadi chezveMweya chakadzama chatisingaoni nemeso edu enyama.
ZVAKAZARURWA 21:9 Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vane ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe ekupedzisira akavuya kwandiri akasvika akataura neni, achiti: Vuya pano, ndigokuratidza mwenga, mukadzi weGwayana.
10 Ipapo wakandiisa mumweya mugomo guru refu, akandiratidza guta guru Jerusarema dzvene, richiburuka kudenga, richibva kuna Mwari,
11 Rinokubwinya kwaMwari; chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rejasipisi, rinovonekera sekiristaro;
Guta raive nechiedza charo, Kristu.
Zvakadaro, apo guta Dzvene, piramidi guru , parinouya pasi panyika kwekupedzisira, Mwari ndiye achange ari denga raro.
Guta iri richange riine chiedza chisingazobvi, nekuti Mwari chiedza.
Chiedza pamusoro pepiramidi hachingazove nemumvuri pamativi epiramidi.
1 JOHANE 1:5 Heyi mharidzo yatakanzwa kwaari, yatinokuparidzirai vo, kuti Mwari chiedza hamune rima maari.
ZVAKAZARURWA 21:23 Guta haritsvagi zuva kana mwedzi, kuti rivhenekerwe nazvo; nokuti kubwinya kwaMwari ndiko kwairivhenekera, nomwenje waro ndiro Gwayana.
Saka kwekupedzisira hakungavi nezuva kana mwenje muguta dzvene iri.
Saka chiitiko cheSabata sezuva rechinomwe rega-rega hachizorevi chinhu munzvimbo ichange iri nechiedza chete uye chisingaganhuke.
Asi naJesu achitonga zvese, kunenge kwave nezororo risingaperi kubva kuzvivi uye kudemba kana kurovererwa nekuti kunenge kusina zvivi ikoko.
ZVAKAZARURWA 21:22 Handina kuona tembere mukati maro nokuti Ishe Mwari wamasimba ose neGwayana itembere yaro.
Guta iro richazogara Mwenga waKristu rakazadzwa nechiedza chisingagumi. Hakuzotsvagwi zuva sezvo zuva rinotenderera zvekuzoteverwa nerima muchiitiko chinoramba chichidzokororeka.
Asi Kristu akagara akadaro haashanduki , chiedza chisingagumi cheguta dzvene. Maari hamuna rima. Saka hakuzovi nehusiku ikoko. Kana pasina usiku haungakwanisi kuverenga mazuva nekuti husiku ndihwo hunoratidza kupera kwezuva. Saka pfungwa yeMugovera inobva yatsakatika.
ZVAKAZARURWA 21:24 Vuye marudzi evaya vanoponeswa achafamba nechiedza charo, madzimambo enyika achauyisa kubwinya kwaro nekukudzwa kwaro mariri.
25 Masuwo aro haangatongozarirwi masikati, nokuti husiku hauchazovipo.
Rima (chiratidzo chezvivi) kwekupedzisira richange risisipo.
Kuchange kusina usiku kuguta guru iri.
Pasina husiku hunoratidza kupera kwezuva, kunenge kusisinawo Mugovera, kuchave nezuva rimwechete risina magumo.
Nekudaro kunenge kusisina Mugovera. Asi munhu wese muguta dzvene iri achange akazadzwa neMweya Mutsvene vachifara muzororo risingaperi kubva kuzvivi.
Nhasiuno tiri kurarama mukati menguva panyika tinonzwisisa kuti kune mazuva ndicho chikonzero nei tichikwanisa kurangarira Sabata reMugovera.
Chikamu chenguva chinotevera chinonzi Mereniyamu apo Kristu nekereke yake yechokwadi , Mwenga wake, vachatonga nyika kwemakore 1 000. Mahedeni akapunyuka munguva yeKutambudzika ndiwo achange ari kutongwa naKristu neMwenga wake.
Chivi chichange chichiripo panyika asi chinenge chakacherechedzwa zvikuru, mufudzi wenguva iyi anenge ari netsvimbo yedare.Tsvimbo iyi inenge iripo kumanikidza vanhu kuita zvakanaka.
ZVAKAZARURWA 2:26 Unokunda achichengeta mabasa angu kusvika kwekupedzisira, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi.
27 Uchavafudza netsvimbo yedare, sehari dzomuvumbi dzinoputsanyiwa; sezvandakapiwawo naBaba vangu.
Nekuti jesu anenge asisina kugara pachigaro chetsitsi kudenga, vanhu vanenge vari panyika munguva yeMereniyamu, pamakore 1 000 erugare vachadzokera kunonamata nenzira yekunamatira mutemberi. Nzira imwechete yaishandiswa muTestamente Yekare vachikumbirira kuregererwa zvivi zvavo. Nguva iyi vachange vachinamata musi weMugovera sevakundi venguva yekutambudzika, kuitira kuripira zvivi zvavo.
ISAYA 66:22 Nekuti denga idzva nenyika itsva, zvandichaita zvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo ndizvo zvinotaura Jehova.
23 Zvino panguva iyo vanhu vose vachauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe nomumwe, napaSabata imwe neimwe ndizvo zvinotaura Jehova.
Panguva yeMereniyamu vanhu vanenge vachiri kurarama munguva asi chivi chinenge chakamanikidzwa. Saka zvinenge zvakaita ''seDenga idzva neNyika itsva''. Nyika ichatongwa naJesu sezvo inenge iri mudenga idzva risina zvivi nenyika itsva. Asi muMereniyamu zvivi zinenge zvichiripo. Saka kunofanirwa kuva nematemberi ekuitira zvipiriso zvekupira zvivi zvavo.
Makore 1 000 ekutonga kwaJesu ndiwo achave Denga rekutanga, kuraira denga kwekutanga tichiri panyika. Asi chivi chinenge chichirimo mumarudzi aya.
Panopera makore 1 000 aya, vanhu vachamukira Jehova, voparadzwa nomoto unobva kudenga. Gungwa richapfachuka robva ranyangadika. Izvi zichaparadza zvose zviri panyika hutachiona hunokonzera zvirwere hwoparadzwa pamwechete nezvirwere zvacho uyezve hunyanzvi hwevanhu hwese mukuisa shanduko panyika kana zvivakwa, zvose zvinobva zvaparadzwa.
ZVAKAZARURWA 21:1 Zvino ndakavona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuvura; negungwa rakanga risisipo.
Zvino guta guru rine mativi mana akaenzana pasi paro aiita mamaira 1 500 ne 1 500 emamaira richabva kudenga. Riri muchimiro chepiramidi chine hurefu hwakasiranda hunoverengawo mamaira 1 500.
ZVAKAZARURWA 21:16 Guta rakanga rakavakwa namativi mana akaenzana, kureba kwaro kwakaenzana nokufara kwaro; akaera guta norutsanga, zvikasvika pamastadia anezvuru zvinegumi nezviviri; kureba nokufara nokukwirira kwaro zvakanga zvakaenzana.
Mwari achagara pamusoro paro sedenga raro ova chiedza cheguta. Piramidi ndicho chega chivakwa chisina mumvuri pamativi acho nguva dzose kana chiedza chikagadzikwa pamusoro pacho sedenga racho.
ZVAKAZARURWA 21:23 Guta haritsvaki zuva kana mwedzi, kuti rivhenekerwe nazvo; nekuti kubwinya kwaMwari ndiko kwairivhenekera, nomwenje waro ndiro Gwayana.
MuDenga idzva nenyika itsva iyi hakuchazovi negungwa, hakuchazovi nenguva, kana nezvivi. Saka Mugovera hauzovi nechirevo ikoko.
Mugovera chiratidzo chekutanga chezororo, semubairo wechivi chekutanga, uchange usisiko.
Chinyorwa chega chega chakakosha chinofanirwa kuva nechindori kana chisimbiso chamambo.
Semuenzaniso: Erizabethi mambokadzi wekuEngirendi.
Chindori chake chinoratidza zita rake, chinzvimbo chake uye nzvimbo yake.
Chinyorwa chimwechete chakanyorwa naMwari pachake chaive mitemo inegumi. Saka chaifanirwa kuiswa chisimbiso kana chindori chaMwari.
EKISODO 20:8 Rangarirai zuva reSabata, kuti murikoshese rive dzvene.
10 Asi zuva rechinomwe iSabata raJehova Mwari wako; usatongobata mabasa naro, iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako ari mumasuo ako,
11 nekuti mazuva matanhatu Jehova akaita denga napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo , akazorora nezuva rechinomwe ; naizvozvo Jehova akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene.
Vhesi 11 ndicho chindori chaMwari.
Mwari (Jehova zita rake) akasika (musiki kana kana mugadziri ndicho chinzvimbo chake, akatigadzira saka anofanirwa kutiudza kuti tirarame sei) denga nenyika negugwa (ndiyo nzvimbo yake).
Saka kana usingadi kurarama munzvimbo yaMwari imwe nzvimbo yaungararame igehena.
Saka murairo kana mutemo wechina ndiwo chindori chemitemo ine gumi muTestamente Yekare.
Asi chisimbiso chaMwari muTestamente Itsva ndiwo Mweya Mutsvene.
VAEFESO 4:30 Regai kuchemedza Mweya Mutsvene waMwari, wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rekudzikinurwa.
Saka Sabata murairo wechina muTestamente yekare mumvuri werubapatidzo rweMweya Mutsvene muTestamente Itsva.
Ropa raJesu rinotigeza Mweya Mutsvene wotisimbisa kuti tinopinda muhumambo hwekudenga.
Apa pega ndipo patinozokwanisa kuzorora muna Kristu tosiya mabasa edu akaipa nekufunga kwakaipa.
EKISODO 20:8 Rangarira zuva reSabata, kuti urichengete rive dzvene.
10 asi zuva rechinomwe iSabata raJehova Mwari wako; usatongobata mabasa naro, iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako ari mumasuwo ako,
Mwari haadi mabasa edu sezvo tichizvida uye tizere nezvivi.
Mwari anoda kugara mumoyo yedu kuti atishandise kuita basa rake.
Anoda kuva mutyairi wemitumbi yedu.
Hatingafadzi Mwari kana tichityaira tega hupenyu hwedu.
Mwari anotarisira kuti tive vakarurama uye vatsvene zvakare anoda kuti hurongwa hwake huzadziswe muhupenyu hwedu.
Anoda kutitungamirira nhanho nenhanho yatinotora mukurarama.
Kana akagara matiri otitungamirira zvakazara, ndipo patinokwanisa kuwana zororo rechokwadi.